Unique Treatments - Prairie Cardiovascular
Dzimwe nguva, zvishoma zvakanyanya.
KuPrairie, ibasa redu kuti udzoke kuhupenyu hwako. Kurapa kwedu kwehunyanzvi, kushoma kwechirwere chemoyo kunopa varwere vedu marwadzo mashoma uye nguva pfupi yekupora.
Kana mavharuvhu emwoyo asingashande, anogona kukonzera zviratidzo zvekufema kwenguva pfupi, kuneta, kurwadziwa muchipfuva uye kunyange kutadza kushanda kwemoyo. KuPrairie, tinopa dzimwe nzira dzisina kusimba dzakadai seTAVR neMitraClip kubatsira varwere vane chirwere chemoyo chevalvular. Varwere vachasangana nechikwata chenyanzvi mukiriniki yedu yevharuvhu avo vese vanoshanda mukubatana kuti vaone chirongwa chakasiyana chekurapa murwere wese.
Iyo yechiratidzo imwe nzira yekuvhura moyo yekuvhiya inonzi Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). Prairie Heart Institute paHSHS St. John's Hospital ndicho chaiva chipatara chekutanga muIllinois kugovera kurapwa kunoponesa uku kuri kupa tariro kuvarwere vemoyo vanokuda zvakanyanya.
Kutungamirirwa nemifananidzo yeX-ray, catheter inopinzwa mutsinga yemukadzi iri pamusoro pechidya. Nemoyo uchiri kurova, vharafu yemwoyo inodonha mukati mecatheter inotungamirirwa muchipfuva. Iri vharuvhu rinongoita dhayamita re#2 penzura. Kamwe mukati, vheji yekutsiva inowedzerwa, ichisundira parutivi mavharuvhu akakuvadzwa. Ivhavha yekutsiva inobva yachengetedzwa panzvimbo, iyo inotanga kushanda pakarepo. Iyo catheter inobva yabviswa. Nekuti maitiro acho haaite zvishoma uye anoda chero kucheka, varwere vazhinji vanogona kutarisira kupora muchipatara nguva yemazuva matatu kana mashoma.
Ndezvipi Zvakanakira TAVR?
Unofanira kutanga kunzwa zviri nani pakarepo. Izvi zvinodaro nekuti vharafu yemoyo wako yava kushanda nemazvo. Vamwe varwere vanogona kutora nguva yakareba kuti vanzwe zviri nani. Vazhinji varwere veTAVR vanoshuma mabhenefiti akadai:
Kuva nesimba rakawanda
Kugona kuita mabasa emazuva ese
Kunzwa kurwadziwa kushoma
Kunzwa kusazvidya mwoyo
Nguva yangu yekupora ichange yakaita sei?
Sezvo TAVR iri nzira isinganyanyi kupindira, varwere vazhinji vanobva muchipatara mukati memazuva 1-3.
Ndeipi gadziriro yandinofanira kuita kare?
Boka rako rekiriniki yevharuvhu richakupa mirairo yekugadzirira maitiro ako eTAVR.
Taura naChiremba Nezve TAVR
Ndezvipi Zvakanakira zveValve Clinic?
Kiriniki yePrairie Valve inopa varwere mukana wekuwana timu yenyanzvi dzemoyo. Iyi modhi yeboka rekutarisira inovimbisa kuti murwere wega wega anogamuchira chirongwa chega chega chekubatsira kurapa mamiriro avo akasiyana.
Nekuda kwekuti moyo wega wega wakasiyana, kupora kunogona kushanduka zvichienderana nerudzi rwekurapwa kunopihwa murwere.
Mumwe weVarongi veMakiriniki edu Varongi achataura newe usati washanya kuti uve nechokwadi chekuti unonzwisisa zvaungatarisira kubva pakushanya kuValve Clinic.
Structural Heart Disease-Valve Clinic
Sezvakaita chero chimiro kana muchina, moyo unoda kuchengetedzwa. Ndosaka vanachiremba vachisundidzira kudya uye maekisesaizi sezvo chero chitoro chemotokari chichikurudzira shanduko yemafuta uye kutenderera kwetai. Iyo inogadzirisa inogona kunge iri shanduko yemvura kana pombi yakavhurwa (stent), basa rakatenderedza (bypass) kana dambudziko remagetsi (ablation). Kana izvo zvikasashanda, zvingada kushandura mavakirwo ayo (chimiro).
Kugadzirisa Zvirwere zveMwoyo Zvisingaperi neKushandura Chimiro
Mamiriro ezvinhu akadai seatrial fibrillation (AFib), kuremara kwemoyo uye kukanganisa kwemoyo zvose zvinoonekwa sezvinhu zvisingaperi zvemoyo zvinogona kushandiswa zvakanakisisa nekugadzirisa chimiro chemoyo.
Maitiro matsva ezvimiro paPrairie ari kuvandudza hupenyu hwevanhu vanogona kunge vachigara ne "anorova." Kubva payakavhurika yemoyo vharafu kugadzirisa / kutsiva, zvishoma invasive vharafu kugadzirisa kune inosimira zvimiro zvemidziyo, mhinduro yezvimiro inogona kukubatsira iwe kurarama zvirinani. Kana uri kunetseka kugadzirisa dambudziko remoyo risingaperi, taura nachiremba wePrairie nhasi.
Taura naChiremba Nezve Clinic Yevhavha
Chii chinonzi MitraClip sarudzo?
MitraClip inzira isiri yekuvhiya uye ine zvishoma invasive kurapwa sarudzo kune varwere vane yakanyanya leaky mitral valve (mitral valve regurgitation) vanoonekwa senjodzi yakawandisa yemaitiro echinyakare ekuvhiya mwoyo wakavhurika. Kubatsirwa kunosanganisira nguva shoma yekudzikinura, nzira shoma shoma, kurwadziwa kuduku kana kuenzaniswa nekuvhiyiwa kwemoyo wakazaruka, kuvandudzwa kwehupenyu hwehupenyu uye zviratidzo, uye kuderedzwa kwechipatara nokuda kwekusagadzikana kwemoyo uye sarudzo inogona kuponesa upenyu kune varwere vane ngozi yakawanda.
Chii chinonzi Mitral Valve Regurgitation?
Mitral regurgitation (MR) is a common heart valve disorder iyo inoita kuti ropa ritenderere kumashure kuburikidza ne mitral valve yemoyo. Mitral valve prolapse kana myxomatous mitral valve chirwere chinowanzokonzera MR. Zvinokonzeresa kuti mitral leaflet(s) (maflaps ari mukati mevharuvhu anovhurika nekuvhara kuti ropa ripfuure) kuti atambanuke kana kuti floppy uye haavharike zvakasimba, zvichikonzera kubuda kweropa kana MR. Kana kuputika kwakanyanya kunoitika nezviratidzo zvakadai sekupfupika kwekufema uye zviratidzo zve congestive heart failure, kuvhiyiwa kwemoyo kugadzirisa kana kutsiva mitral valve ndiyo nzira yakanakisisa yekurapa. Kuvhiya kune njodzi kune vamwe varwere zvakadaro.
Ndine mitral valve inodonha zvakanyanya, chii chandinofanira kuita?
Kuti uone kana iwe uri mukana wekurapwa neMitraClip, iwe uchave nekuwongorora kwakadzama nechikwata chemultidisciplinary kuPrairie Heart Institute kusanganisira chiremba wemwoyo, chiremba wekuvhiya moyo uye anesthesiologist. Iwe uchave uine transthoracic echocardiogram (TTE) uye transesophageal echocardiogram (TEE) kuti uone kana kurapwa neMitraClip kuchigoneka. Chikwata chinotarisa kuti mamiriro ako akabatwa sei nemishonga, ungave uri mumiriri wekuvhiyiwa zvakajairika uye kana uchizobatsirwa nekurapwa neMitraClip.
Prairie Heart Institute paHSHS St. John's Hospital ndiyo yaiva chipatara chekutanga kuita chirongwa cheMitraClip muIllinois kunze kweChicago metropolitan area.
Chii chinoitika panguva yeMitraClip Procedure?
Iyo nzira inoitwa pasi peanesthesia. Inosanganisira kuisa chikamu chimwe chete kana kupfuura pane mitral valve munzvimbo yekuputika, pasina kuvhiyiwa kuburikidza nekateti inopinzwa nemutsinga mugodhi. Kana iyo clip yave panzvimbo inova chikamu chechigarire chemoyo wako, ichibvumira mitral valve yako kuvhara zvakanyanya uye kuderedza kuyerera kweropa kumashure.
Tarisa kuti maitiro acho anoitwa sei muvhidhiyo pazasi.
Ndeapi Mabhenefiti eMitraClip?
Benefits zvinosanganisira kupfupika kupora nguva, kushoma invasive, zvakanyanya kuderera kurwadza zvichienzaniswa nekuvhurika moyo kuvhiyiwa, kuvandudzwa kwehupenyu uye zviratidzo, uye kuderedzwa muchipatara che congestive heart failure.
Ivhareji yekugara muchipatara ndeye 1-2 mazuva. Varwere vanowanzomuka uye vachifamba zuva rinotevera maitiro.
Chiremba wako wemwoyo achakupa mirairo chaiyo yezuva rekuita. Nekudaro, sezvo pasina kuchekwa muchipfuva chako, pre-maitiro kugadzirira kushoma.
Taura naChiremba Nezve MitraClip
Chii chinonzi WATCHMAN LAAC implant?
Mudziyo weWATCHMAN mudziyo unozvikudza wakaita separachuti wakadyarwa zvachose muLAA uchivhara. Inodzivirira kugwamba kweropa muLAA kubva pakupinda muropa. Yakagadzirwa nezvinhu zvinowanzoitika kumidziyo yakawanda yezvokurapa, inenge saizi yekota, uye haigone kuonekwa kunze kwemuviri.
Mudziyo weWATCHMAN unoiswa sei?
Iyo WATCHMAN Implant inowanzoitwa iwe wakarara. Chiremba wako achatungamira mudziyo weWATCHMAN mumoyo mako kuburikidza nechubhu inochinjika (catheter) inopinzwa nemutsinga mugumbo rako repamusoro. Kana nzvimbo yacho ichinge yasimbiswa, chiremba wako achasunungura iyo implant kuti aisiye zvachose mumoyo. Iyo yekuisirwa haidi kuvhurika moyo kuvhiyiwa. Unozofanira kugara muchipatara kwehusiku hwose uye kupora kunowanzotora maawa makumi maviri nemana. Mushure memavhiki matanhatu, unogona kurega kutora ropa rako rakapfava.
Ndeapi matanho asati adyarwa WATCHMAN?
Kuti uone kana uri munhu anogona kurapwa neWATCHMAN mudziyo, uchave neongororo yakazara neboka reWATCHMAN kuPrairie Heart Institute. Izvi zvinosanganisira:
Mifananidzo yeTEE inoshandiswa kuongorora chimiro uye saizi yeLAA yako. Izvo zviyero zvichabatsira chiremba wako kuona saizi yeLAAC mudziyo. Iwe haugone kudya kana kunwa chero chinhu maawa matanhatu pamberi peTEE.
Pazuva reTEE yako uchatorwa ropa kuti uongorore zvakakosha lab values.
Taura naChiremba Nezve WATCHMAN
Ndezvipi Zvakanakira Watchman?
Chinonyanya kukosha kuvarwere ndechekuti havachada anticoagulation yeatrial fibrillation yavo.
Vazhinji varwere vanowanzobuda muchipatara mukati memazuva 1-2 mushure mekuita.
Watchman inzira isingadhure. Chiremba wako wemoyo anokupa mirairo yezuva rekuita.
Chii chinonzi Cardiac Ablation?
Cardiac ablation inoshandisa simba kugadzira mavanga madiki mumoyo mako. Aya mavanga anobatsira kumisa zviratidzo zvemagetsi zvisina kujairika zvinofamba nemoyo wako uye zvichikonzera kurova kwemoyo kusingaite (arrhythmia). Cardiac ablation inogona zvakare kubata atrial fibrillation (a-fib). Chiremba wako anogona kukurudzira kubvisa kana mishonga kana mamwe maitiro, akadai se cardioversion, asingagadzirisi arrhythmia yako.
Kune marudzi maviri ekubviswa kwemoyo:
Radiofrequency ablation: Inoshandisa catheter kutumira radiofrequency simba (yakafanana nekupisa kwemicrowave) iyo inogadzira mavanga akatenderera patsinga yega yega kana boka retsinga.
Cryoablation: Catheter imwe chete inotumira chibharumu chakaiswa chinhu chinoomesa matishu kuti chikonzere vanga.
Ndeapi Mabhenefiti eCardiac Ablation?
Cardiac Ablation inogona kubudirira mukurapa marudzi mazhinji ezvisina kujairika zvemwoyo rhythms. Varwere vazhinji havachadi mishonga senge inoderedza ropa mushure mekubudirira kwekubvisa.
Ungangoda kurara muchipatara, asi vanhu vazhinji vanoenda kumba zuva rimwe chetero. Kana zvakadaro, unozorora mukamuri yekupora kwemaawa mashoma apo mukoti anonyatso tarisisa kurova kwemoyo wako.
Chiremba wako wemoyo anokupa mirairo yekutevera usati waitwa.
Taura naChiremba Nezve Cardiac Ablation
Chii chinonzi Cardiothoracic (Open Heart) Surgery?
Cardiothoracic kana kuvhura mwoyo kuvhiyiwa kuvhiya kugadzirisa dambudziko mukati mechipfuva kana moyo. Inoitwa nachiremba anovhiya anovhura chipfuva kuti awane kusvika kumoyo.
Nzira inowanzoitwa nekuvhiyiwa kwemoyo yakavhurika ndeye coronary artery bypass surgery. Izvi zvinotsiva basa retsinga dzemwoyo dzinopa tsandanyama yemwoyo neropa. Kuvhiya uku kungadiwa kana tsinga dzepamwoyo dzikava nhete nemhaka yehosha yemwoyo kana kuti pashure pehosha yemwoyo.
Tsinga inogona kutorwa kubva pachipfuva kana pagumbo uye inogona kubatanidzwa munzira inoyerera ichitenderedza mudziyo une chirwere.
Imwe nzira inoitwa nekuvhiyiwa kwemoyo yakavhurika kutsiva vharuvhu isina kunaka. Mavharuvhu ari mumoyo anodiwa kumisa ropa kuyerera richidzokera muzvikamu zvemoyo mushure mekupombwa kubva mazviri. Varwere vazhinji vanoonekwa muPrairie Valve Clinic vasati vavhiyiwa vharafu.
Rimwe dambudziko rinonzi aortic aneurysm rinogonawo kugadziriswa nekuvhiyiwa kwemoyo wakazaruka. Apa ndipo panoita bundu mutsinga huru inobuda pamwoyo.
Taura naChiremba Nezve CT Surgery
Ndeapi Mabhenefiti eOpen Heart Surgery?
Mushure mekupora kubva pakuvhiyiwa kwemoyo wakavhurika, panofanirwa kuve nekuvandudzika kwezviratidzo zvakaita sekufema uye kurwadziwa muchipfuva.
Kudzorera kuchasiyana zvichienderana nerudzi rwemaitiro.
Ndapota bvunza chiremba wako nezvekugadzirira kusati kwaitwa.
Isu tinopfuura kungove mishonga yemazuva ano
Iwo azvino matekinoroji haaite mutsauko mukuru pasina iyo yakasarudzika sisitimu yekutarisira yakaiswa pamwechete naPrairie.
Ona kuti takasiyana sei